Xiaomi dia hanana telefaona misy efijery 120 Hz amin'ny 2020 | Androidsis
Ny tahan'ny fanavaozana dia singa iray manandanja lehibe amin'ny telefaona. Zavatra iray izay nanjary lakilen'ny lalao maodely tamin'ny voalohany, nitarina tamin'ny sehatra hafa. Tamin'ity taona ity dia efa hitantsika fa misy maodely maromaro miaraka amin'ny efijery 90 Hz. Amin'ny taona 2020 dia handeha lavitra kokoa ny raharaha, satria ny marika toa an'i Xiaomi dia hampiasa efijery 120 Hz.
Ity dia zavatra efa lazain'ny haino aman-jery maro. Amin'izao fotoana izao dia tsy dia be loatra ny antsipiriany, fa amin'ny taona 2020 dia afaka manantena isika fa hanana maodely ao amin'ny katalaoginy i Xiaomi hampiasa efijery 120 Hz izy io. Taham-pamelombelona azo tsapain-tanana izay mety ho tsikaritra rehefa milalao lalao.
Toa i Xiaomi no efa manao fitsapana amin'ny efijery 120 Hz. Ny zava-drehetra dia manondro fa izy ireo dia efa vonona ny hamidy amin'ny taona 2020, mba ho fanombohana lehibe amin'ny maodely marobe ao anatin'ny marika sinoa izy ireo. Amin'izao fotoana izao, tsy fantatra izay modely mety hampiasa azy io.
Mandrak'izao tsy nisy antsipiriany fanampiny momba ny drafitra nomena ny marika sinoa amin'ity lafiny ity. Tsy fantatray izay modely mety hampiasa an'ity efijery vaovao ity, na avo lenta izy ireo, sns. Tsy fantatra daholo ireo angona rehetra ireo, fa azo antoka fa hosivina tsikelikely.
Ho hitantsika eo izany ny fomba fampidiran'i Xiaomi ny efijery 120 Hz amin'ny findainy. Satria io singa io dia mety ho singa manan-danja tokoa amin'ny telefaoninao, hanavahana ny tenanao amin'ireo safidy hafa eny an-tsena. Saingy tsy maintsy miandry isika vao hahalala bebe kokoa momba izany.
Xiaomi dia tsy ho marika tokana hampiasa an'ity karazana efijery ity, antenaina ihany koa fa izany marika hafa toa ny OnePlus hampiditra fampisehoana 2020 Hz ao amin'ny telefaonin'izy ireo amin'ny taona 120. Ka azo antoka fa afaka manantena vaovao maro amin'ity lafiny ity isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Xiaomi dia hanana telefaona misy efijery 120 Hz amin'ny 2020
Ny Samsung Galaxy W20 5G dia efa misy daty ofisialy ofisialy